Ukuqonda izinto ezizodwa kwisiNgesi ngegrama
Izinto ezizodwa kwiNgesi yesiGrike
Ngegrama yesiNgesi, into ecacileyo sisibizo , igama lesibizo , okanye isigamagama esichaza oko okanye ngubani ofumana isenzo sesenzi esicatshulwa kwisigatshana okanye kwisivakalisi .
Ngokuqhelekileyo (kodwa kungekho rhoqo), umxholo wesigatshana wenza isenzo, kwaye into echanekileyo isetyenziswe ngumxholo: Jake [umxholo] wabhaka [isenzi esicatshulwa] ikhekhe [into echanekileyo]. Ukuba icandelwana liqulethe into engangqalileyo , into engekho ngqo ivela phakathi kwesenzi kunye nento echanekileyo: Jake [umxholo] wabhaka [isenzi esicatshulwa] Kate [into engekho ngqo] ikhekhe [into echanekileyo].
Xa izibhengezo zisebenza njengezinto ezichanekileyo, ziqhelekileyo zithatha ifom yelo linjongo. Iinjongo zeenjongo zezenzibizo zesiNgesi yimi , thina, wena, yena, yona, yona, yona kunye nabani na . (Qaphela ukuba wena kunye neefomu ezifanayo kwimeko ephantsi .)
Uvale ikotoni ngokucophelela, waqala wamanga uyise , wabuya unina , wavula isiqhekeza , waphakamisa ingulube , wambamba ngesitama sakhe.
(EB White, iWebhusayithi kaCharlotte . Harper & Brothers, 1952)
"UMama wavula ibhokisi ye-crackers ... Ndayicoca anyanisi , kwaye uBaley wavula amabini amabini okanye amathanga amathathu ."
(Maya Angelou, Ndiyazi isizathu sokuba I-Bird Cing Iingoma . I-Random House, ngo-1969)
"Kodwa ukuba ingcamango ingonakalisa ulwimi , ulwimi luyakonakalisa ingcamango ."
(George Orwell, "Izopolitiko kunye noLwimi lwesiNgesi," 1946)
"Sizixelele amabali ukuze siphile."
(UJoan Didion, i -White Album . USimon & Schuster, 1979)
"Awukwazi ukuvavanya ngesibindi ."
(U-Annie Dillard, Umntwana wase-American Harper & Row, 1987)
"[Abaphuhlisi] banqabisa iibhanki ukuba bazalise phantsi, kwaye bahlasele ukuhamba kwamanzi asele ."
(Edward Hoagland, "I-Courage of Turtles." Izwi leNdlu , uDisemba 12, 1968)
Ngomso emva kwemini, i-pet terrier yam bulala iiliti ezimbini nenyoka .
Iinjongo eziPhezulu eziPhambili
"[Isenzi] sinokuthile okungaphezulu kweyodwa, ebizwa ngokuba yinto ecacileyo into . Ukuba isivakalisi siqulethe into ehambelanayo, ucela Ngubani na okanye emva koko isenzi isenzo sinikeza iimpendulo ezimbini okanye ngaphezulu.
UBuzzz Aldrin uhlolisise inyanga nengaphandle .
Wenza i- Gemini 12 ne- Apollo 11 kwindawo.
Ngokomzekelo wesibini, indawo yinto ebhengezwe kuyo . Akuyona into ngqo. "
( Prentice Hall Ukubhala kunye negrammar: Usebenziso lweNxibelelwano kwiPrentice Hall, 2001)
Amagatya asebenzayo kunye namagqabantshintshi
" Izinto ezizodwa zihlala zibhalwa ngamagama amagama (okanye amagama abo afana nawo, umz., Izigatshana zokumisela ).
Wonke umntu wamthiyile utitshala .
(esebenzayo: utitshala uyinto ngqo)
Utitshala wathandwa ngumntu wonke.
(ukungabonakaliyo: utitshala uphantsi) "
(URonald Carter noMichael McCarthy, iCambridge Grammar yeNgesi . IChamridge University Press, 2006)
I-Word Order in Amabakala kunye nezoBini eziPhambili kunye nezinto ezingekho ngqo
"Ngesiqendu sesiNgesi kunye kunye nxamnye nento engangqalileyo, kukho imiyalelo emibini yale mihlathi. Ukuba into engekho ngqo imakwe ngumboniso (ngokuqhelekileyo ukuya ku ), into echanekileyo ifika ngokukhawuleza emva kwesenzi, kwaye ibinzana kunye Into engacacanga into ezayo emva koko, njengokuba ndathumela ileta kum uthando wam , apho ileta yinto ehambelanayo yokuthunyelwa kuyo. Ngomnye umyalelo, akukho mzekelo, kwaye into ecacileyo yinto yesibini kwiibinzana ezimbini zegama, njengoko Ndathumela uthando lwam enobumba (apho iileta kusekhona into echanekileyo yokuthunyelwa). "
(James R. Hurford, igrama: IsiKhokelo sabafundi . IChamphani ye-University Cambridge, 1994)
Izinto ezijoliswe ngqo kwiiNdawo
"Ezinye izenzi zentshukumo eziguqukayo azizisebenzisi izinto ezizithe ngqo xa into ecacileyo ichazwa ngentsingiselo yesiqhelo . Ngokomzekelo, isenzi sesiqhelo sithatha (ukuhambisa isithuthi ngaphandle kokuhamba kweemoto, kwaye unqande okanye uyeke ), akuyimfuneko ukuba uthi, 'Ndiyifake imoto phezu' ngenxa yokuba imoto ichazwa ngolu hlobo. Ungatsho nje ukuthi 'ndidlulile.' Nangona kunjalo, into efunekayo xa kufuneka isetyenziswe komnye umntu. Ngokomzekelo, xa amagosa aseburhulumenteni axelela umntu ukuba ashenxise isithuthi kwindlela kwaye ayeke, kufuneka into echanekileyo: igosa lithatha umntu . "
(Gail Brenner, iNew World Idioms Handbook yeWebster World Wiley, 2003)
I- grammar yokuqala yokuvelisa [imigaqo] yokufumana (okanye iinguqulelo ): imigaqo ethatha isakhiwo esipheleleyo kwaye ishintshe into ethile.
(7a) UDave akazange ayithande loo movie.
(7b) Le movie, uDave ayithandi kakhulu.
Ezi zivakalisi zibini zibhekiselele ngokufanayo, mhlawumbi umahluko ogqityiweyo . (7a) ubonisa umyalelo 'olungundoqo': into engathandekiyo iyindawo 'eqhelekileyo' yento ecacileyo . Ngokwahlukileyo, ku (7b), ukungathandwanga akulandelwa yinto, njengoko kufanelekile, kwaye le movie iyindawo engacacanga phambi kwesi sifundo. Ngoko, isiphakamiso siya, igrama ingabamba ukufana phakathi (7a) kunye (7b) ngokuthi (7b) eqinisweni ayilwanga yimithetho yokwakha. Kunoko, kunesimo 'esisezantsi' esicacile ngakumbi (7a) kwaye senziwa yimithetho yokuseka. Nangona kunjalo, 'emva kokuba imigaqo yokubunjwa yakha ifomu elingaphantsi, umgaqo ovela kumgaqo ushukumisela ukuba ifilimu ibe phambi kwesivakalisi ukuba yenze ifom yomgangatho . "
(Ray Jackendoff, iziseko zoLwimi: Ubunjani, intsingiselo, igrama, i-Evolution . I-Oxford University Press, 2002)
I-Side Lighter yezinto ezizodwa
- "UDinsdale, wayeyinkwenkwe enhle. Wabethelela intloko yam etafileni yekhofi."
- "Ndingayibamba inkunzi, ukuba ndibe nendlala." Ndiya kwenza utyhefu lukhuphe ngaphandle kobutyhefu bamaxoxo ezibulalayo.
(Mackenzie Crook njengoGareth kwi "I-Experience Experience". I-Ofisi , 2001)
Ixesha elidlulileyo (igrama)
Uhlalutyo lwabaphulaphuli kwiNtetho nokuBumba
I-AP yovavanyo lwesiNgesi: 101 Imigqaliselo ephambili
Ngenye iNgcombolo kwiiLwimi
Iingcebiso ngokuBhala OkuBanzi: Ukubeka iSimo
Ukutshintshwa kweHanger Ukutshintshwa kwenziwe lula
I-Biography kaRenee Fleming
Yiyiphi i-Double Double?
Ingaba iiVenus zakho zibonakaliswa kuLuthando?
IYunivesithi ye-Kutztown yasePennsylvania
Ukuba nguBat Mitzvah
Ukubaluleka kokubaluleka: UkuShawula iMilinganiselo yeMilinganiselo kunye nePraphite Pencil
I-Yokohama Avid iphakamisa ukuhlaziywa kwexesha elide
Izinto eziqhelekileyo zeMpahla
Imbali emfutshane yeeMishini yokuhlamba
Abaculi kunye neeMvumi zama-Middle Ages
Yonke iBhodi malunga neBatten
YoNxweme lwaMazwe ngamazwe
Iimoto zeeNkonzo zeBomW Sport
Jawaharlal Nehru, uNkulumbuso wokuqala we-Indiya
Ngubani Ubakhathalele NgamaNxuwa Andala ePalyra, eSiriya?
6 Iinkqubo zeeSatifikethi zeNgcaciso ze-Intanethi
Iinkcazo kunye nemizekelo ye-Orthography
Sllen Churchill Semple
U-ANDERSON - Igama elithi & Origin
I-Letter's Recommendation and Do not
Más de 60 profesiones para sacar la visa TN para trabajar en USA
Isibonelo esiphezulu seNkathazo
AP Information Information Exam
I-Ice Age elandelayo
Tir na nOg - I-Irish Legend yeTir na nOg